MPU & Card Services | Ministry of Planning and Finance
- နေ့စဉ်ငွေကျပ် (၁၀) သိန်းအထိ ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
ATM Card Account ဖွင့်လှစ်ရန်လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များ ဖြည့်သွင်းရပါမည်။ Card ကိုင်ဆောင်သူသည် အသက်(၁၈)နှစ် ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ရပါမည်။
MFTB ၏ ATM Card အချင်းချင်း MFTB ၏ATM များတွင် မိမိလွှဲပို့လိုသည့် ATM Card A/C No. သိရှိပါက အခြားATM Card A/C သို့ A/C Transfer ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ အများဆုံးလွှဲပို့နိုင်သည့်ငွေပမာဏမှာ တစ်ကြိမ်လျှင် ကျပ်(၅)သိန်းနှုန်းဖြင့် တစ်နေ့လျှင် အများဆုံး ကျပ်(၁၀)သိန်းထိ လွှဲပို့နိုင်ပါသည်။
ATM CARD အသုံးပြုသူများသိထားသင့်သည့်အချက်များ
မိမိလျှို့ဝှက်နံပါတ် (Pin No) အား အသုံးပြု၍ ပြည်တွင်းရှိ အခြားသော ဘဏ်များ ATM များ POS များတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အခြားဘဏ်များ၏ ATM စက်များတွင် ငွေထုတ်ယူမှသာ ထုတ်ယူသော ငွေပမာဏ၏ ၀.၅၀% ဝန်ဆောင်ခ ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ (ဥပမာ-ငွေကျပ် ၁၀,၀၀၀/- ထုတ်ယူပါက ကျပ်၅၀/- ပေးဆောင်ရမည်။)
မိမိလျှို့ဝှက်နံပါတ် (Pin No) သည် အထူးအရေးကြီး၍ မိမိမှအပ သူတစ်ပါးအား အသိပေးခြင်းမပြုလုပ်ရ။
ATM Card အား ATM စက်တွင်အသုံးပြုပါက မိမိ၏လျှို့ဝှက်နံပါတ် (Pin No) အား မှန်ကန်စွာ ရိုက်နှိပ်ပါ။ သုံးကြိမ်မှားယွင်းပါက Card အား ATM စက်မှ သိမ်းဆည်းသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
MFTB တွင် နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်ထားသူများမှ မိမိ၏ ATM Card A/C သို့ ကျပ်ငွေဖြင့် စာရင်းပြောင်းထည့်သွင်းလိုလျှင် ဆောင်ရွက်သောနေ့ရှိ MFTB ၏ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းဖြင့် တန်ဘိုးသင့်၍ ထည့်သွင်းပေးပါမည်။
No. MFTB ATM CARD
နှစ်စဉ်ကြေး ကျပ် ၂,၀၀၀/-
ကနဦးအပ်နှံငွေ ကျပ် ၁၀,၀၀၀/-
အနည်းဆုံးလက်ကျန် ကျပ် ၁,၀၀၀/-
ကဒ်သက်တမ်း ၁၀ နှစ်
ကဒ်သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ ပျောက်ဆုံး၊ပျက်စီးပါက ကျပ် ၅,၀၀၀/-
တစ်နေ့အများဆုံးထုတ်ယူနိုင်မည့်ပမာဏ ကျပ် ၁၀ သိန်း
Transaction ( ၁ ) ကြိမ်လျှင် ကျပ် ၃ သိန်း